चौंरीले मन नपराएको रदुङपोखरी « Tuwachung.com
१. केही पनि होइनन् भन्ने काँग्रेस खोटाङका नेताहरू नै सर्वधन राईसँग भयभीत
२. काँग्रेस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सभापतिमा राई अत्यधिक बहुमतले विजयी
३. स्वास्थ्य संयोजक रामकुमार भगतमाथि विप्लव माओवादीको केरकार
४. यसकारण गाग्रो र अम्खोरा खाली राख्न हुँदैन
५. काँग्रेसलाई ‘पाटी’ होइन, ‘पार्टी’जस्तो बनाउन सचिवमा उम्मेदवारी
६. नगर सभापतिमा वडाध्यक्ष राउतको उम्मेदवारी
७. नगर सभापतिमा काँग्रेस जिकास सदस्य राईको उम्मेदवारी घोषणा
८. उपमेयरको उपहार
९. धर्मात्मा र पापिष्ट छुट्ट्याउने धर्मधारेश्वर
१०. हिँडडुल गर्ने रूख
११. बालेको दीप त आखिर निभ्छ नै, ननिभोस् नेपाली नागरिकका सपना
१२. ४ घन्टा ४० मिनेट रूखमै बसेर अनलाइन कक्षा
चौंरीले मन नपराएको रदुङपोखरी
शुभ मुकारुङ	२०७८ भाद्र २५, १२:४३
जुमहाङ नामक किरात पुरुषका सायामा र न्योयहाङ (नेवाहाङ ?) नामक छोरीज्वाईं थिए । सायामा र न्योयहाङ अरुण नदी पछ्याउँदै उत्तरतर्फ लागे । अघि बढ्दै जाँदा उनीहरू हिमालपारि (तिब्बत) सम्म पुगे । उनीहरूभन्दा अघि आफ्ना दाजु माप्याहाङ तिब्बत पुगिसकेका थिए । झुक्किएर आफ्ना भाइ सोक्रेहाङलाई विजयपुरमा मारेका कारण पश्चातापमा परेकाले माप्याहाङ तिब्बत पुगेका हुन् ।
न्योयहाङ र सायामा तिब्बतबाट फर्कंदा संखुवासभाको रदुङ/रुदाङपोखरीआसपासमा रहन–बस्न थाले । सायामा र न्योयहाङसँग चौंरी थिए । चौंरी जंगलमा चर्न गए पनि आफैं घर फर्कन्थे । एक दिन चौंरी घर फर्केनन् । चौंरी घर नफर्केपछि सायामा र न्योयहाङ चौंरी खोज्न घरबाट निस्कने तयारी गर्दागर्दै अचानक हिउँ पर्न थाल्यो । हिउँ परेका कारण उनीहरू चौंरी खोज्न जान सकेनन् ।
हिउँ परेको लामो समय पछि रोकियो । घाम लाग्न थालेपछि सायामा र न्योयहाङले आफ्ना चौंरीका गोहो भेट्टाए । चांैरीको गोहो किमाथाङ्कातर्फ गएको थियो । पछ्याउँदै जाँदै गरेको गोहो मेटिएपछि न्योयहाङ र सायामा विलखबन्दमा परे ।
चौंरीको गोहो हराएपछि सायामा र न्योयहाङले सल्लाह गरे । रुदाङ/रदुङपोखरीको निकासबाट बग्ने पानीसँगै दारको आरी बगाइपठाए । पानीले दारको आरी बगाउँदै लग्यो । सायामा र न्योयहाङले पछ्याउँदै गए । बग्दै गएको आरी किमाथाङ्का हुँदै हेदाङ्नामा अडियो । हेदाङ्नामा उनीहरूले आरी भेट्टाएपछि पक्कै पनि चौंरी यही वरपर हुनुपर्छ भन्ठानी खोज्न थाले ।
रहँदा–बस्दा सायामा र न्योयहाङलाई रदुङ/रुदाङपोखरीतिर फर्कने इच्छा भएन । चौंरीले मन नपराएको ठाउँमा हामी कसरी बस्नू ? भन्ठानी हेदाङ्नावरपरका क्षेत्रमै उनीहरू बस्न थाले । संखुवासभावरपर रहेका आजका याम्फू, नेवाहाङ, लोहोरुङ किरात राई उनै सायामा र न्योयहाङका सन्तान हुन् भन्ने स्थानीय वयोवृद्धा हाकाहाकी बताउँछन् ।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि खड्का परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेकी
बालेको दीप त आखिर निभ्छ नै, ननिभोस् नेपाली नागरिकका सपना
स्थान : हलेसी गुफाको प्राङ्गण । समय : साँझको ६ः३० बजे । अतिथि : इवन
नगर सभापतिमा वडाध्यक्ष राउतको उम्मेदवारी
मंगलटार (खोटाङ) । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ मंगलटार वडाध्यक्ष रमेश राउतले नगर सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका
नगर सभापतिमा काँग्रेस जिकास सदस्य राईको उम्मेदवारी घोषणा
दुर्छिम (खोटाङ) । नेपाली काँग्रेस खोटाङ जिल्ला कार्यसमिति सदस्य चक्रकुमार राईले नगर सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा
काँग्रेस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सभापतिमा राई अत्यधिक बहुमतले विजयी
दुर्छिम (खोटाङ) । नेपाली काँग्रेस खोटाङ जिल्ला कार्यसमिति सदस्य चक्रकुमार राई नगर सभापतिमा अत्यधिक बहुमतले
काँग्रेसलाई ‘पाटी’ होइन, ‘पार्टी’जस्तो बनाउन सचिवमा उम्मेदवारी
गनिल्याउँदा विद्यार्थी राजनीति थालेको १५ वर्ष पुगेछ । २२ वर्ष पुग्दा–नपुग्दै कमल गिरी नेपाल विद्यार्थी